Real Estate Listings: » Business Directory » Construction Companies » Ukuvuselela nezinsiza ze-Bim e-UAE1
Sisebenza ngokukhethekile ekuletheni imodeli yokwakha yokwakha - Izinsizakalo ze-BIM ukuguqula ukwakhiwa, ubunjiniyela, nezinqubo zokwakha, okwenza ababambiqhaza bephrojekthi basebenzisane kangcono futhi banciphise izindleko nesikhathi. I-Alwarqa Ucwaningo Lwezinkampani yinkampani engafinyeleleki kulesi sizinda ngokunikeza ikhwalithi engalingani emisebenzini yethu Yezokwakha Modeling. Umkhuba wokukhipha izinsiza ze-Revit BIM uvame ukwamukelwa ukuthuthukisa ukusebenza kwanoma iyiphi iphrojekthi. Zisetshenziswa ngabaningi bezingcweti ezibandakanya onjiniyela, abakhi bezakhiwo, abaqambi bezakhiwo, abaphathi bezokwakha, osonkontileka nabangaphansi kosonkontileka, abaphathi besikhungo, abaphathi bamaphrojekthi nezokwakha. I-imeyili id: - [email protected] Xhumana no: +97142676170
Ivuselela Ukuphinda Inzime